ကျောင်းပထမဆုံးနေ့ရဲ့ မူကြိုဆရာမလေးးး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကျောင်းပထမဆုံးနေ့ရဲ့ မူကြိုဆရာမလေးးး
Posted by mamanoyar on Jun 27, 2012 in My Dear Diary | 25 comments
အိမ်မှုကိစ္စလေးတွေ လုပ်ပြီးတာနဲ့ သူမကျောင်းသွားဖို့ ရေချိုးပြင်ဆင်ရပါတော့တယ်။ သနပ်ခါးလူးပြီး အဖြူအစိမ်း လေးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ဝတ်ဆင်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတာနဲ့ လိုအပ်တာလေးတွေထည့် ခြင်းလေးဆွဲပြီး ကျောင်းဘက်ဆီသို့ ခပ်သွက်သွက်လေး လျှောက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းရောက်ပြီး အတန်းတွေခွဲ တာဝန်ပေးတော့ အခြား အတန်းတွေ တာဝန်မကျခင် မနက်ခင်း မူကြိုထိန်းပေးဖို့ တာဝန်ပေးခြင်းခံရပါတယ်။ ဆရာမထဲမှာ အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်၊ ဆက်ဆက်ထိမခံချင်တဲ့ ကျမ အရမ်းကို ဆူပူပြီး တစ်ယောက်တစ်ပေါက် အော်သူကအော် ငိုသူကငို မိဘတွေအချို့က လိုက်ပို့သူကပို့နဲ့ အင်မတန်မှဆူညံ နေတဲ့ မူကြို ကျောင်းသားတွေ ရှိတဲ့နေရာကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။
အတန်းထဲလဲဝင်ရော တစ်ယောက်တစ်ပေါက် နဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုစထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားရပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ ကျောင်းခန်းအပြင်ဖက်က စိန်ပန်းပင်အောက်ကို ခေါ်ထုတ်ပြီး သူတို့စိတ်ဝင်စားလောက်မယ့် အကွက်အမျိုးမျိုး ကို ပြောပြ လုပ်ပြနဲ့ တစ်ချိန်ကုန်လာခဲ့ပါတယ်။ ပထမတော့ အရမ်းစိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ကျောင်းပထဆုံးနေ့မို့ အိမ်ကမိဘတွေက သပ်သပ်ရပ်ရပ် လုပ်ပေးလိုက်ကြပေမယ့် ခဏကြာတာနဲ့ နှပ်ချေး တွေက တွဲလောင်း နောက် သေးပေါက်ချသူကပေါက် နဲ့ အစတော့ ရွှံသလိုရှိတာနဲ့ မြင်လည်းမကောင်းတော့ သားနှပ်ချေး သုပ်လိုက်ဦး သမီးနှပ်ချေးသုပ်လိုက်ဦး ပြောပေမယ့် လက်နဲ့ ဆွဲချလိုက်တော့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးပြန့်သွားပြီ့း  ပိုကြည့်မကောင်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ မျက်နှာဘေးလှည့်ပြီး ကိုယ်တိုင် အဝတ်စတွေနဲ့ လိုက်သုပ်ပေးရပါတော့တယ်။ ခဏကြာတော့ ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်က အပြင်ထွက်သွားပါတယ်။ ကျမလဲ လိုက်ပြီး သားဘာလုပ်သွားတာလဲ လို့မေးလိုက်တော့ မုန့်သွားဝယ်မလို့ လို့ပြောပါတယ်။ သား မုန့်က အခုမဝယ်ရသေးဘူးနော် မုန့်စားကျောင်းဆင်းမှ ဝယ်ရအောင် လို့ ကျမနှစ်သိမ့်မိတယ်။
ဒါပေမယ့် မရပါဘူး။ ငါ့မယ်ပိုက်ဆံ ငါးကျပ်ပါတယ် မုန့်ဝယ်မှာဆိုပြီး ထွက်ပြေးပါတယ်။ ဒါနဲ့ မုန့်ဆိုင်အထိသွားရင် လမ်းမှာစိုးရိမ်ရတာမို့ ကျမလဲ လိုက်ဖမ်းပြီး သားရယ် ဆရာမမှာ မုန့်ရှိပါတယ် သားကိုကျွေးမယ်နော် ဆရာမနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီး သူ့လက်လေး ဆွဲကာ ပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန် ကျမကို သူ့ခြေထောက်နဲ့ ကန်ချလိုက်ပါတယ်။ ကျမလဲ ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ရမလားဆိုပြီး ရှက်လဲရှက် ဒေါသလဲထွက်သွားမိတယ်။ဒါနဲ့ သူ့ကို အနားမှာ ရှိတဲ့ ဒုတ်နဲ့ရွယ်ပြီး ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့ မေးလိုက်တော့ လက်ကို ကုန်းကိုက်ပါတယ်။ ကျမကြမ်းလေ သူကြမ်းလေဖြစ်မယ်ဆိုတာ သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဒုတ်ချပြီး ခဏကြာတော့ သားနဲ့ဆရာမနဲ့အတူ မုန့်သွားဝယ်ကြမယ် အခု ခဏပိုက်ဆံပြန်ယူအောင် ဆရာမနဲ့ ပြန်လိုက်ခဲ့နော် ဆိုပြီး သူ့ မျက်နှာမှာပေနေတဲ့ နှပ်ချေးတွေသုပ်ပေးပြီး ကျမသူ့ကို ညင်သာစွာ ပွေ့ခေါ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ဆရာမတကယ်ပြောတာနော် ဆိုပြီး ပြုံးပြုံးလေး ပါလာခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်။ တစ်ချိန်လုံး စိတ်ညစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမယ့် ကျမ မျက်နှာ မမဲ့နိုင်ပဲ
ပြုံးယောင်သန်းနေခဲ့တာတော့ ကျမကိုကျမပဲ အသိဆုံးဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
(မှတ်ချက်- ကျမ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်သွားပေမယ့် အပြန်မှာတော့ ညနေပြန်ဝတ်လို့ မရအောင် ညစ်ပတ်သွားရပါတော့တယ်ရှင်) အဲဒီနှစ်က ရွာကျောင်းမှာ ဆရာမကြီးရဲ့ တောင်းဆိုမှုဖြင့် တစ်နှစ်တာ ဝင်ကူညီခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
mama noyar has written 25 post in this Website..
View all posts by mamanoyar →
အဲ့လို ပေကပ်ကပ်ဂျစ်တူးစိန် လေးတွေ နဲ့ ကျုပ်သာ ကြုံခဲ့လို့ ကတော့
မမနို လို သဘောထားနိုင်ပါ့မလား မသေချာဘူးဗျို့ ။
သည်းခံပေးရတာပေါ့ ဦးပေနဲ့ မအိရယ်
ကျမကို သူ့ခြေထောက်နဲ့ ကန်ချလိုက်ပါတယ်။ …..:P
ဆရာမတွေထဲ မူကြိုကလေးတွေကို ထိန်းသိမ်းရတဲ့ ဆရာမတွေ အပင်ပန်းဆုံးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ တူတော်မောင် သောင်းကျန်းတာ ပြည်ပျက်နေတဲ့ အတိုင်းပါ။ စစချင်းပို့တဲ့ရက်က။ အသားကျလို့ ရက်ကြာတော့လည်း ကလေးက ပျော်သွားပါတယ်။
မမနိုရာက စိတ်ရှည်သဘောကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
စကားမစပ် ခြေထောက်နဲ့ ကန်တဲ့ကလေးက ရွာထဲက စိန်ဗိုက်ဗိုက်လား မသိဘူး။
မှန်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ သန့်ရှင်းရေး
ကျန်းမာရေ ၊နောက် သူတို့လေးတွေ ကို နားလည်လာအောင်
သူတို့ရေးချင်တာရေး ခြစ်ချင်တာချစ်ရအောင် အမြဲချွန်ပေးနေရတာလေ
မူကြိုဆရာမ လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့
လောကမှာ ရစ်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရင် အေးဆေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်
ဒီအရွယ်ဟာ သွန်သင်ဆုံးမလို့ အကောင်းဆုံးအရွယ်ပါပဲ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ လက်ဦးဆရာက မူကြိုကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဖယောင်းလိုအရွယ်ဆိုတော့ ပုံသွင်းသလိုရပါတယ်။ ကိုယ်တွေလည်း ဒီဘ၀ကနေ တက်လာဆိုတော့ ဒီအရွယ်ထဲက တတ်သိလိမ်မာတဲ့ဘ၀လေးတွေ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေသာ အဓိကကျပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မူကြိုဆရာမလေးနဲ့ ဖိုင်နယ်ကျောင်းသားလေး ကျနော်
အေ ဘီ စီ ဒီ အဆင့်က တက်ဖို့ ၀ိုင်းပြောပေးကြဘာာာ….
ကျောင်းပီးဖို့လည်း နီးပါဘီကွာ… နော်.နိုရာ.နော်..
ကျောပြင်ဗျောတင်မယ့်လူနဲ့ ဖုန်းဆက်မယ့်လူတွေ မလာခင် လစ်ပီ… (၀ှစ် ၀ှစ်)
မင်္ဂလာပါဆရာမ….. ဆရာတွေထဲမှာမူကြိုနဲ့ မူလတန်းသင်တဲ့
ဒါမျိုး အလုပ်ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေ…
မိုက်လေး ..လည်း ကလေးလေးတွေကို..
မင်ဂါပါ ချာမ ချာမကို ခြောက်နဲ့ကန်တဲ့ မိုက်တိမိုက်ကန်းလေးက အခုရွာထဲမှာ ပုလင်းလက်က မလွှတ်ပဲ ရမ်းနေတဲ့လူများလား ချာမး)
အခက်ခဲဆုံး အထိန်းသိမ်းရခက်ဆုံးက မူကြိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
“ငါ့မယ်ပိုက်ဆံ ငါးကျပ်ပါတယ် မုန့်ဝယ်မှာဆိုပြီး ထွက်ပြေးပါတယ်။ ”
ငါးကျပ်ဆိုတာ ရေးမှာတာလား။ မရှင်းလို့ ပါ။
တကယ်တော့ သူ့မိဘက စလိုက်တဲ့နေ့မို့
မမနိုရာရေ … ဆရာမလုပ်ရတာ .. တကယ့်ကို မလွယ်တဲ့ အလုပ်ပါ … အထူးသဖြင့် အခုလို ကလေးပေါက်စနတွေ၊ မူလတန်း အရွယ်တွေကို သင်ပေးရတဲ့ ဆရာမလုပ်ရတာ … ၀ါသနာပါရုံအပြင် အတော်လေး သည်းခံနိုင်မှကိုဖြစ်မှာ … ။ ကျွန်မ ကလေးတွေကို ကျူရှင်သင်ပေးဖူးတယ် .. အချိန်ပိုင်းတောင် ရူးချင်ချင်တောင်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်းမသင်ချင်တော့ဘူး ။ တစ်ချို့ကလေးတွေက အိမ်မှာ နေသလိုနေချင်ကြတယ် ဆရာမဆိုတာ ကြောက်ရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး … ။ အတန်းကြီးတွေကို သင်တဲ့ဆရာမက စာသင်ပြတာကို အလေးနက်ထားပြီးသင်လို့ ရပေမယ့် … ကလေးတွေကို သင်ရတဲ့ ဆရာမကတော့ စာသင်ရတာအပြင် တခြားသော လူမှုဆက်ဆံရေးတွေ ၊ စကားအပြောဆိုတွေကအစ သင်ပေးရတယ် … ။
ကျွန်မ အမေလည်း အခုလက်ရှိ ၊ မူလတန်းပြတစ်ယောက်ပါ … အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် သုံးဆယ်နီးပါး … မူလတန်းပြဘ၀ထဲမှာပဲ … စိတ်တွေနှစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကတော့ ၀ါသနာကြောင့် ဆရာမလုပ်ရာကနေ ..စာသင်တဲ့ အလုပ်ပေါ် သံယောဇဉ်ဖြစ်သွားတာကြောင့် … သူများတွေ အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း အဆင့်ဆင့်ဖြေပြီး ထပ်သင်နေကြပြီး …. ကျူရှင်တွေပေး ၊ နာမည်ကြီးဝိုင်းတွေထောင်နေချိန်မှာ ..သူကတော့ မူလတန်းပြဘ၀နဲ့ပဲ … ဘ၀ကိုရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းနေစဲပါပဲ … ။ ၀ါသနာနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုအရ လုပ်တယ်ဆိုတော့လည်း … ကျွန်မတို့ မတားခဲ့ဘူး … စိတ်ချမ်းသာဖို့ သာ အဓိက မို့ပါ ။
” ကျမကြမ်းလေ သူကြမ်းလေဖြစ်မယ်ဆိုတာ သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ ” မမနိုရာက အဲလိုသတိထားမိတယ်ဆိုတာ တော်တာပေါ့။ တွေ့ဖူးပါတယ်။ တချို့ဆို ရှက်ရှက်နဲ့ ပိုကြမ်းတော့ ကလေးကလည်းကြမ်းနဲ့ တော်တော်ဆိုးတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါတွေ့ဖူးပါတယ်။
“မင်္ဂလာပါ ”ဆရာမအနာဂက်အတွက် ပညာတက်လူငယ်ကလေးတွေ မွေးထုတ်ပေးတဲ့ဆရာမကိုလေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ
မမနိုရာစနိုးကိုခွင့်လွှတ်ပါ စနိုးမမနိုရာကို မနှုတ်ဆက်မိဘူး မင်္ဂလာပါဆရာမ အဲ့လို စိတ်ရှည် ရမယ်သည်းခံတက်ရမယ် ကလေးတွေကိုဘယ်လိုသွန်သင်ဆုံးမရမယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆရာမဖြစ်ကြည့်တော့မှ ကိုယ်ချင်းစာတက်လိမ့်မယ်လို့ စနိုးတို့ဆရာမခဏခဏဆုံးမလေ့ရှိတယ် မမနိုရာရော ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အပေါ်ကောငါတို့တုံးကကော အဲ့လိုလေးတွေ ဆိုးခဲ့ဖူးလားလို့ မမနိုရာစဉ်းစားကြည့်ဖူးလားဟင်စနိုးကတော့ တခါတလေ မောင်ဝမ်းကွဲလေးတွေ ညီမ၀မ်းကွဲလေးတွေ စာသင်ပေးရတာ လောက်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာမရှိဘူး ဆရာမဖြစ်ချင်တာတော့ ငယ်ငယ်လေးထဲ ဖြစ်ချင်တာ ခုတော့ မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဝဋ်လည်မှာကြောက်နေမိလို့ပါဘဲ ။